Ministry Announcements | Ministry Of Information
Post date: 07/31/2017 - 08:53
May Yu FM Radio programme refutes rumours of invented stories in Rakhine
Post date: 02/09/2017 - 10:44
In effect since 1 February 2017, regarding the part-time broadcast asatest May Yu FM Radio Programme that can be received within the area of Buthitaung, Maungtaw and Yathedaung townships in Rakhine State, the following statement has been released to the public.
Union Supreme Court responds to legal action against unjust verdicts by judges
Post date: 03/13/2015 - 08:22
Nay Pyi Taw, 12 March — The Pyithu Hluttaw on Thursday was asked ofaquery of the way legal action is taken against judges for unjust verdicts and how many of them have been punished, with the Supreme Court of the Union responding that unjust decisions are likely to result from the wrong interpretation of legal stipulations and that judges imposing unlawful decisions are punished regarding the severity of their wrongful verdicts.
Union FM sends message of felicitations to Lithuania
Post date: 03/11/2015 - 08:17
Nay Pyi Taw, 11 March—U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar, has sentamessage of felicitations to His Excellency Mr. Linas Antanas Linkevičius, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, on the occasion of the Independence Day of the Republic of Lithuania, which falls on 11 March 2015. MNA
Post date: 03/10/2015 - 10:43
The New Society Party headquartered at No. 106/108 at the corner of Myanma Gonyi Road and 91st street in Mingala Taungnyunt Township, Yangon Region, registered by the Union Election Commission asapolitical party under the Article5of the Political Parties Registration Law, submitted an application
to register and to use title, flag and logo of the party on 9-3-2015.
အကြံပြုခြင်း/ တိုင်ကြားခြင်း ကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာချက်
Post date: 09/23/2013 - 17:38
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန Web Media Portal တွင် အကြံပြုခြင်း/ တိုင်ကြားခြင်း ကဏ္ဍတွင် အကြံပြုစာများ ပေးပို့နိုင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
ငါးမွေးမြူရေးကန်များ ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး သတိပေး နှိုးဆော်ချက်
Post date: 09/22/2013 - 10:26
နိုင်ငံတော် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေးနှင့် ပြည်ပတင်ပို့ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြား ဝင်ငွေရရှိရေးအတွက် နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ငါးမွေးမြူရေး ကန်များ ဖြင့် မွေးမြူဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ
Post date: 08/12/2013 - 13:15
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေး ခေါင်းဆောင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)တို့သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင်
မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးအစားအစာနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းမှ အကြွေးပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိသည့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက် သတိပေးကြော်ငြာချက်
Post date: 08/02/2013 - 11:13
မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးအစားအစာနှင့် နို့ထွက် ပစ္စည်းလုပ်ငန်း ၏ (၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပထမ (၆)လ လုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းများ စစ်ဆေးချက်အရ ကြွေး ကျန်ကျပ်သန်း
ပင်လယ်ရေအောက်ကေဘယ် ချွတ်ယွင်း အင်တာနက်များ တစ်လခန့် နှေးနေဦးမည်
Post date: 07/24/2013 - 08:24
၁။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ကြောင်းများနှင့် အဓိက ချိတ်ဆက်ထားသော ပင်လယ်ရေအောက် ဖိုင်ဘာကေဘယ် (SEA-ME-WE 3) ဆက်ကြောင်းသည် (၂၂-၇-၂၀၁၃)ရက်နေ့ ညနေ (၀၅း၀၀) နာရီခန့်တွင် ချွတ်ယွင်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။